मान्ठा डराएको जुग– मोहन मैनाली « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७४, शनिबार १२:४९
नेपालबाट महिना दिन अघि मगाएका छ वटा किताबमध्ये पत्रकार मोहन मैनालीको ‘मान्ठा डराएको जुग’ पनि एक थियो । यो पुस्तक लू र ऐना पढिसकेपछि सुरु गरें । पुस्तकको आकार र चर्चाका आधारमा मैले एउटा सूची तयार पारेको थिएँ । त्यसै अनुरूप यो तेस्रो पुस्तक बनेको थियो । धेरै अघि केही यस्तै स्वादको गोविन्द वर्तमानको ‘सोह्र साँझहरू’ पढ्ने मौका मिलेको थियो । ‘सोह्र साँझहरू’ का एकदमै थोरै कुरा मात्रै याद छन् । वर्तमान धनगढीमा पनि पुगेकाले धनगढीका सन्दर्भमा लेखेका केही छिटपुट यादहरू अझै बाँकी छन् । त्यसबाहेक उतिसारो केही याद छैन ।’
“नौला मान्ठा (मान्छे) आउँदा डर मान्दाछौं, हजुर ! मान्ठादेखि मान्ठा डराउन्या जुग (युग) आयो ।”
यो पुस्तक सरकार र माओवादी बीच ०५८ साल साउनमा भएको युद्धविराम पश्चात चुलिएको माओवादी र सरकारी आक्रमण पत्याक्रमणमा पिल्सिएका निर्दोस जनताहरूको दु:खको दस्ताबेज हो । सङ्खुवासभा, धादिङ्ग र कर्णाली वारपारका जिल्लाहरूमा गएर संकटकालका बेला निर्दोषहरूमाथि माओवादी र सरकार पक्षबाट भएका अन्याय र अत्याचारका घटनाहरूको विवरण पुस्तकमा बडो मार्मिक ढङ्गले समावेश गरिएको छ । जति निर्धो त्यति पीडित हुन बाध्य नेपालीको कथा यो पुस्तकमा समेटिएको छ ।
०५८ साउन ८ मा भएको युद्धविराम त्यसै सालको मंसिर ६ मा भंग भयो । माओवादीले युद्ध–विरामलाई सामरिक शक्ति अभवृद्धि गर्न प्रयोग गर्‍यो । उनीहरूले युद्ध–विराम भएकै साँझ दाङको भगवतीप्रसाद गुल्मका मेजरसहित १४ जना सैनिक मारेर त्यहाँका ९९ थान सेल्फ लोडिङ राइफल लगे । सेना, प्रहरी र नागरिक गरी ४० जनालाई ठहरै पारे । अधिकांश सरकारी कार्यालय ध्वस्त बनाए । त्यसै रात स्याङ्जा सदरमुकाममा पनि आक्रमण गरे । अन्य धेरै ठाउँमा पनि सानाठूला फौजी आक्रमण भए । १० गते सोलुखुम्बुको सल्लेरी र फाप्लुमा आक्रमण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत, चार जना सैनिक र २७ जना प्रहरीका ज्यान लिए । परिणामस्वरूप सरकारले संकटकाल घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि सोझासाझा जनताको सेना र माओवादीको दोहोरो मारमा पर्ने कथाका शृङ्खलाहरू सुरु भयो ।
माओवादीका लागि सेनालाई लक्षित गर्नु गाह्रो थिएन । निश्चित पोसाकमा हिँड्ने र निश्चित स्थानमा भेटिने भएकाले उनीहरूका तर्फबाट सोझासाझाहरू सायद त्यति मर्नु परेन् । हुन त मार्न मन लागेकालाई उनीहरूले पनि कहिले सुराकीको नाममा त कहिले विरोधी भनेर मारेकै थिए । तर पनि सेनालाई माओवादी छुट्याउन जस्तो गाह्रो माओवादीलाई सेना छुट्याउन भएन । त्यसैले पनि सेना र प्रहरीका हातबाट धेरै निर्दोशहरू मारिएको हुन सक्छ । पुस्तकमा निर्दोशहरू मारिएको दुई ठूला घटनाहरूका रूपमा बाजुराको पाण्डुसैनमा मारिएका ८ जनाको घटना र कालिकोटको कोटबाडा विमानस्थलमा मारिएका ३५ जानाको घटनाहरूलाई लिइएको छ । त्यसबाहेक पनि सेनाबाट भएका अन्य ज्यादतीका घटनाहरूका बारेमा पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ ।
०५८ साल फाल्गुन ४ गते अछामको सदरमुकाम मंगलसेन र अर्को प्रमुख बजार साँफेबगरमा ४८ जना नेपाली सेना र २७ जना प्रहरी अनि मंगलसेनका विभिन्न स्थानमा रहेका ४५ जना प्रहरी र आम नागरिक गरेर १३८ जनाको ज्यान लिए भने १२९ जना लाई घाइते बनाए । सबैजसो सरकारी कार्यालय डढाई दिए । मृत्युताण्डवको भोलिपल्टै देखि अछाम र आसपासका क्षेत्रमा व्यापक सेना तथा प्रहरी परिचालन गरियो । सहयोगका लागी धनगढीबाट उडेको प्रहरीको हेलिकप्टर बस्न सकेन सेनाको हेलिकप्टरमा गोली प्रहार भयो । पछि माओवादीहरू विनायक गाउँतिर लागेपछि मध्यदिनमा पाँचवटा हेलिकप्टरमा गएका सेना मंगलसेन उत्रिए । आसपासका क्षेत्रमा खोजी गर्ने क्रममा आक्रमणकारीहरू कालीकोटको कोटबाडा पुगेको खबर पाएर सेनाको हेलिकप्टर पनि कोटबाडा विमानस्थलमा पुगे । माओवादीहरूको अवरोधका कारण उत्रन सकेनन्, बमको सेल खसाएर गए । माओवादी सम्भावित खतराबाट जोगिन नजिकैको गाउँ रुसा तिर लागे । उनीहरूमध्येकी एक जना त्यहिँ छुटेकी रहिछन् । भोलिपल्ट फेरि बस्न खोजिरहेको सेनाको हेलिकप्टरमा गोली हानेर उनी पनि बाँकीका सम्पर्कमा आइन् । हेलिकप्टर एक घण्टा टाढाको घारी भन्ने ठाउँमा ओर्लियो ।
विमानस्थल कब्जाको उद्देश्यले आएको सेनाले विमानस्थलमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर ३५ जना मारे । सेना आउँदा डरले घरभित्र लुक्ने गंगा विष्टलाई आमाको काखबाट थुतेर बाहिर ल्याएर गोली हानेर मारे । कसुर गर्ने माओवादी पहिले नै हिँडि सकेका थिए । त्यहाँ भएका भनेका विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँबाट गएका कुल्लीहरू थिए । जोगिमाराका १५ देखि ६० वर्षसम्मका परिवार धान्ने आशले आ–आफ्नै कथा बोकेर त्यहाँ काम गर्न पसेका १७ जना पनि एकै घान भए । ती पनि ठहरै भए । गाउँलेलाई लास गाड्न भनेर सेना हिँड्यो । रेडियो नेपालले कालिकोट आसपासका क्षेत्रमा भएको भिडन्तका क्रममा ७६ जना आतङ्ककारी मारिएको सूचना फुक्यो । यतिमा सकिएन । भोलिपल्ट आएको सेनाले एकै खाल्डामा १०/११ जना गरेर गाडेका लास निकाल्न लगाई तिनका लासका छेउ हतियार राखेर फोटो खिचेर लग्यो । पहिले सेना आउँदा भागेका माओवादी फर्केर दोस्रो पटक गाडेका लास निकाल्न लगाएर तिनलाई कम्युनिस्टको झण्डाले बेरेर फोटो खिचें ।
उता यी पीडितका घरमा लामो समयसम्म अत्तोपत्तो भएन् । भएपछि पनि उनीहरूले लास पाएनन् । कतिले त आई पो हाल्छ कि भनेर आशा पालेर बसे । धेरैले कुशको लाश बनाएर दाहसंस्कार गरे । जोगीमाराबाट कमाउन भनी गएकालाई माओवादीले काम रोक्न भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले काम नगरे कमाई खाने बाटो नभएको भनेर काम रोकेनन् । अन्तमा ज्यान नै गुमाउनु पर्‍यो । उनीहरूसँग मकवानपुर, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र मोरङबाट आएका मज्दुरहरू पनि काम गरी रहेका थिए ।
त्यस्तै, बाजुराको पाण्डुसेनमा मार्तडीबाट आएका सेना र पुलिसको टोलीले ८ जना गाउँले मार्छ रेडियोले आतंककारी मरेको भनेर फुक्यो । प्रसासन समक्ष विरोध गर्न जाउँ भन्ने मन गरेकाहरू पनि रेडियोले एकतर्फी रूपमा आतंककारी घोषणा गरिएकाहरूको पक्षमा बोल्दा न आफै पनि फसादमा परिने हो कि भनेर चुपचाप बस्न बाध्य भए ।
त्यसका अलावा ०५८ साउन ७ गतेकै राति पाण्डुसैन प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी १८ जना प्रहरी मारेको, डोल्पाको दुनैमा १४ जना प्रहरी मारेको तीन करोड नगद र तीन करोड बराबरको सुनचाँदी हात पारेको, ०५९ कात्तिक २८ गतेको जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आक्रमण गर्दा प्रजिअ, प्रहरी, सेना गरी ४४ जनाको ज्यान लिएको लगायतका घटनाहरू पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । खलङ्गा आक्रमणका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, कारागार, कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, अदालत, हुलाक समेत २४/२५ वटा सरकारी कार्यालय खण्डहर बन्न पुग्यो । माओवादी स्वयंका पनि ५७ जनाको लास यत्रतत्र फेला पर्‍यो । माओवादी आक्रमणमा परेका हरेक जिल्ला सदरमुकामको स्थिति लगभग यस्तै भए ।
ज्यान जाने कुरा त एउटा छ तर बाँच्नेहरू पनि सुखले बाँच्न मुस्किल पर्‍यो । सदरमुकामहरूमा प्रहरीको अनुपस्थिति हुने वित्तिकै हवाइ सम्पर्क विक्षेद गरिए, सरकारी कार्यालय हट्न थाले, खाली भवन जगाइन थाले, सामान ओसार पसार गर्न गाह्रो हुन थाल्छ, माओवादीलाई फाइदा पुग्ने कारण देखाई निश्चित मात्रामा मात्रै जुता, औषधी लगायतका सामान गाउँमा छिरे । माओवादीले मारेकाको सदगत गर्नलाई लास पनि भेटिएन । सेनाले मारेकाहरूको पनि घरमा खबर सम्म पुगेन् । त्यसै त दुर्गम ठाउँहरू अझ भएका पूर्वाधारहरू पनि जलाइनु, बजार बन्द गरिनु, यातायात ठप्प पारिनु, पुलहरू काटिनु, आदिले त्यहाँको जीवन झन् दुरुह बनायो ।
जोगीमाराबाट गएका १७ को कथा ‘जोगिमाराका ज्यूँदाहरू’ मार्फत यत्रतत्र पुग्यो । राज्य, विभिन्न संघसंस्था र विदेशका नेपालीहरूबाट सहयोगहरू प्राप्त भयो । सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बाजुराका पीडितहरूको कथा पनि मैनालीका लेखहरूमा अनि श्रव्य–दृश्यहरूमा बाहिर आएपछि सरकारले ‘लाज मानेर’ उनीहरूलाई पनि एक–एक लाख क्षेतिपूर्ति दियो । राम्रै बसीसकेको कोल्टी बजार जनयुद्धका क्रममा उजाडियो । पुस्तक सकिँदासम्म त्यो केही हदसम्म फेरि पहिले जस्तै भएको छ ।
एक हदसम्म माथि उकासिएको समाजको विकासको गति दशकौं अवरोध हुँदा पक्कै पनि त्यसले त्यहाँको समाजलाई नराम्ररी पछि पारेको छ । भर्खरै मानव विकास सूचकांकले निकालेको तथ्यांकअनुसार नेपालको सबैभन्दा गरिब जिल्लाका रूपमा बाजुरा देखियो । बाजुराका ६४ प्रतिशत जिल्लावासी गरिबीको रेखामुनि देखिए । त्यस पछिका गरिब जिल्लामा कालीकोट (५७.९ प्रतिशत), बझाङ (५६.८ प्रतिशत), हुम्ला (५६ प्रतिशत), जुम्ला (४९ प्रतिशत), अछाम (४७.२ प्रतिशत), मुगु (४७.१ प्रतिशत) र डोल्पा (४२.८ प्रतिशत) परेका छन् । बझाङ्ग बाहेक यी तिनै जिल्लाहरू हुन जहाँ पाठकहरू मैनालीसँगै द्वन्द्वका असरहर बुझ्न ‘मान्ठा डराएको जुग’मा यात्रा गर्छन् । यी जिल्लाहरूको यो अवस्थाका लागि त्यतिबेलाका द्वन्द्वरत पक्षहरू कत्तिको जिम्मेबार मान्न सकिएला । भएका विकास निमार्ण सबै ध्वस्त पार्ने, आपूर्ति अवरुद्ध पार्ने, अनाहकमा ज्यान लिने, आदि सबै सबै गतिविधिमा लागेका जिम्मेवारहरूले यो अवस्था ल्याएका हुन भनि भन्दा अत्युक्ति होला र ? क्रान्ति गर्नेहरूले पनि उनीहरूले भनेको व्यवस्था ल्याए । गोलीले मर्ने जनता अब भोक, रोग र शोकले मर्दैछन् । तर त्यो मान्छे देखि मान्छे डराउने युगले दिएको चोट त्यतिले नै निको होला त ?
पुस्तककको सबल पक्ष यसको विषय वस्तु हो । एउटै स्थानको अलग अलग समयमा भोगिएको कुरा एकै ठाउँमा क्रमैसँग राखिएको भए सजिलो हुने थियो । प्रत्येक पटक जाँदा फरक कुराहरू भेटिनु अनि बिचमा अन्य जिल्लाको खबर आउनाले स्थान विशेषको पुरा चित्र मनमा बस्न गाह्रो हुन्छ । जोगिमाराका ज्युँदाहरूको कथासाग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै पनि कहिले पुस्तकको सुरु त कहिले पुछार खोतल्न पर्‍यो । त्यसका अलावा पुस्तकमा समावेश गरिएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको एउटा संक्षिप्त जानकारी समयतालिका बनाएर पुस्तकको अन्तमा राखिएको भए पाठकलाई सजिलो हुने महशुस गरेँ । भ्रमण गर्दाको मार्गचित्र प्रत्येक खण्डको अघिल्तिर राखिएको भए कुन ठाउँ कता भन्ने जान्न प्रस्ट हुन्थ्यो । स्थानीय लवज अझ धेरै राख्न पाएको भए संवादको मौलिकता झन बढ्थ्यो । अन्यथा पुस्कत एकदमै राम्रो छ । पुस्तकका घटनाहरूमै आधारित केही श्रव्य–दृष्य सामग्रीहरू यूटुबमा भेटिँदा खुशी लागेको थियो । हेर्दा मन एक दमै रोयो । पुस्तकमा छुटेका कुराहरू त्यहाँ बाट पनि थाहा हुन्छ । जे होस् ‘मान्ठा डराएको जुग’ एउटा पढ्नै पर्ने पुस्तक हो ।